နုဖတ်နေ တဲ့ အသား အရည်လေးနဲ့ ကြွေချင်စရာ ကောင်းနေပြန် တဲ့ ခင်ရတီသင်းရဲ့ စပယ်ရှယ် ဗီဒီယိုလေး – Shwe Sar
နုဖတ်နေ တဲ့ အသား အရည်လေးနဲ့ ကြွေချင်စရာ ကောင်းနေပြန် တဲ့ ခင်ရတီသင်းရဲ့ စပယ်ရှယ် ဗီဒီယိုလေး
အရုပ်မလေး လို ချစ်စရာ ကောင်းပြီး အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်း အလှ ကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ တက်သစ်ဆ မော်ဒယ်လ် သင်းရတီခင် ကို သိကြမယ် ထင် ပါတယ် နော်..။မော်ဒယ်လ် လောက ကို ဝင်ရောက်တာ မကြာသေး ပင်မဲ့ ပရိသတ် အများအပြား ရဲ့ အားပေးဝန်းရံ မှုကို တဖြည်းဖြည်း ရရှိလာတဲ့ ကြော်ငြာ တွေပါ ရိုက်လာ ရတဲ့ မော်ဒယ်လေးပဲ ဖြစ်ပါ တယ်..။ယောကျာ်းလေး ပရိသတ် တွေ ရဲ့ ဝန်းရံ အားပေးမှု ရရှိထားတဲ့ သူမ ကတော့ social media လောက မှာ နာမည် တစ်လုံးနဲ့ ရပ်တည် နေသူ တစ်ယောက် လည်း ဖြစ်ပါ တယ်..။
သူမ ရဲ့ အမိုက်စား ပုံတွေ နဲ့ ညို့ အားပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင် နိုင်သူလေး ဖြစ်တာကြောင့် လက်ရှိ ဖေ့ဘွတ် စာမျက်နှာ မှာ ရေပန်းစား လူကြိုက်များကာ ပုရိသ တွေ ဝန်းရံ နေကြတာလည်း ဖြစ်ပါ တယ်..။သူမ ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်တွေ ကို လူမှု ကွန်ယက် ဖေ့ဘွတ် ပေါ်တွင် အများဆုံး တင်လေ့ ရှိတာတွေ့ရပါ တယ်..။
ပုံလေးတွေ တိုင်း သင်းရတီခင် တစ်ယောက် ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိ နဲ့ လန်းလွန်း နေတာ လည်းဖြစ်ပါ တယ်..။သူမ ကတော့ ဆက်ဆီ ကျကျ ရိုက်ထားတဲ့ လန်းလွန်း တဲ့ ပုံလေးကို တင်ပေး လာတာပဲ ဖြစ်ပါ တယ်..။ချစ်စရာ ကောင်းလွန်း လှတဲ့ မော်ဒယ် သင်းရတီခင် ရဲ့ အလှ ပုံရိပ်လေး တွေကို ပရိတ်သတ် တွေ အတွက် ပြန်လည် မျှဝေပေး လိုက် တယ်နော်…။ အားလုံးပဲ ယခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ကပ်ဆိုးကြီးတွေဘေးကနေ ကျော်လွှားနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော် … 🙏 🙏 🙏 ။ သဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆိုရင် Like နဲ့ Shareလေးလုပ်ပေးသွားပါအုံးနော် …. ။
photo –Khin Yati Thin
အရုပျမလေး လို ခဈြစရာ ကောငျးပွီး အမိုကျစား ခန်ဓာကိုယျ ကောကျကွောငျး အလှ ကို ပိုငျဆိုငျ ထားတဲ့ တကျသဈဆ မျောဒယျလျ သငျးရတီခငျ ကို သိကွမယျ ထငျ ပါတယျ နျော..။မျောဒယျလျ လောက ကို ဝငျရောကျတာ မကွာသေး ပငျမဲ့ ပရိသတျ အမြားအပွား ရဲ့ အားပေးဝနျးရံ မှုကို တဖွညျးဖွညျး ရရှိလာတဲ့ ကွျောငွာ တှပေါ ရိုကျလာ ရတဲ့ မျောဒယျလေးပဲ ဖွဈပါ တယျ..။ယောကျြားလေး ပရိသတျ တှေ ရဲ့ ဝနျးရံ အားပေးမှု ရရှိထားတဲ့ သူမ ကတော့ social media လောက မှာ နာမညျ တဈလုံးနဲ့ ရပျတညျ နသေူ တဈယောကျ လညျး ဖွဈပါ တယျ..။
သူမ ရဲ့ အမိုကျစား ပုံတှေ နဲ့ ညို့ အားပွငျးပွငျး ဆှဲဆောငျ နိုငျသူလေး ဖွဈတာကွောငျ့ လကျရှိ ဖဘှေ့တျ စာမကျြနှာ မှာ ရပေနျးစား လူကွိုကျမြားကာ ပုရိသ တှေ ဝနျးရံ နကွေတာလညျး ဖွဈပါ တယျ..။သူမ ရဲ့ အမိုကျစား ပုံရိပျတှေ ကို လူမှု ကှနျယကျ ဖဘှေ့တျ ပျေါတှငျ အမြားဆုံး တငျလေ့ ရှိတာတှရေ့ပါ တယျ..။
ပုံလေးတှေ တိုငျး သငျးရတီခငျ တဈယောကျ ဆှဲဆောငျမှု ရှိရှိ နဲ့ လနျးလှနျး နတော လညျးဖွဈပါ တယျ..။သူမ ကတော့ ဆကျဆီ ကကြ ရိုကျထားတဲ့ လနျးလှနျး တဲ့ ပုံလေးကို တငျပေး လာတာပဲ ဖွဈပါ တယျ..။ခဈြစရာ ကောငျးလှနျး လှတဲ့ မျောဒယျ သငျးရတီခငျ ရဲ့ အလှ ပုံရိပျလေး တှကေို ပရိတျသတျ တှေ အတှကျ ပွနျလညျ မြှဝပေေး လိုကျ တယျနျော…။ အားလုံးပဲ ယခုဖွဈပျေါနတေဲ့ ကပျဆိုးကွီးတှဘေေးကနေ ကြျောလှားနိုငျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော … 🙏 🙏 🙏 ။ သဘောကနြှဈသကျတယျဆိုရငျ Like နဲ့ Shareလေးလုပျပေးသှားပါအုံးနျော …. ။
Previous post မြင်ရ သူ တိုင်း ကြွေဆင်းသွားလောက်အောင် မိမိုက်နေ တဲ့ မျက်ဝန်း
Next post အရမ်း ကို မိလွန်းနေ တဲ့ ဖက်ရှင်လေး နဲ့ ဆက်ဆီ ကျလွန်း နေတဲ့ သင်းရတီခင်